UBABA WAYENOTHANDO OLUDLULELE NGABANTU ABAKHUBAZEKILE” – Sivubela intuthuko Newspaper
UBABA WAYENOTHANDO OLUDLULELE NGABANTU ABAKHUBAZEKILE”
LOKHU ngukudla obekunikelelwa ngabeCJ Mthethwa Trust kwabakhubazekile baseMsinga
KUTUSWE izimfundiso ezinhle zokuthanda abantu zikaMfu Celani Jeffery Mthethwa owayeyilungu lesiShayamthetho saKwaZulu-Natal owashona ngo-2008 ayezishumayeza umndeni wakhe zokuthanda abantu.
Umndeni wakhe ongabanikazi be-CJ Mthethwa Trust uhlanganise abantu abakhubazekile bamawadi akuMasipala waseMsinga banikela nge-grocer njengokugcina usiko lwasekhaya abalushiyelwa nguyise lokuthanda abantu bawo wonke amazinga.
UNkk Thembi Mosiea uMaMthethwa oyindodakazi kaMfu Mthethwa enguNobhala weCJ Mthethwa Trust futhi eyisikhulu oPhikweni lweziNhlekelele kuMasipala wasekuRhuleni eGauteng uthe uyise wabashiya nengcebo engajwayelekile yothando ebayalela ukuba mabokwabelana ngalo nabantu uma engasekho. Uthe uyise owayengumfundisi waseMahoney Evangelical Church in Southern Africa (MECSA) wayenothando lwabantu abakhubazekile futhi efisa ukubabona bejabule ngaso sonke isikhathi ukuze bengezukuzibona behlukile kwabanye abantu ngenxa yesimo sabo. “Sikhule ekhaya sibahlanu izingane zikababa singamantombazane amathathu nabafowethu ababili. Ngokuhamba kwesikhathi sandile ekhaya siyizingane ngoba kunezingane ezafika nobaba wazenza ezakhe. Phakathi kwazo kwakukhona nezazikhubazekile ezaphenduka abafowethu nodadewethu kithina. Ubaba wasifundisa ukuba nothando lwabantu ethi lokhu akwenzayo ufisa nathi sikhule ngakho. Yingakho simkhumbule ngokuthi sinikele kwabakhubazekile baseMsinga okuyindawo azalelwa kuyona wakhulela kuyona kwaze kwaba ushonela kuyona. Besifisa ukunikela kwabaningi kodwa siqoke abangu-20 ukugcina imibandela yeCOVID-19 yokuhlangana kwabantu njengoba besingumndeni futhi kunezimenywa ebezisohlelweni okugcine senza isibalo sabantu abangu-50 abebesehholo lasePomeroy,” ubeke kanje.
UNkk Mosiea ubonge unina uNkk Jabulile Mthethwa uMaNene onguSihlalo weCJ Mthethwa Trust ngokuba nenhliziyo evulekile kubantu njengoba akwazi ukuba yisikhukhukazi esimatshweletshwele esakwazi ukufaka ngaphansi kwamaphiko aso namatshwele amaqanda esingazange siwafukamele. Uthe kuningi okusezinhlelweni zeCJ Mthethwa Trust kokusiza abantu futhi bayaqinisekisa ukuthi konke abazokwenza bazobe benikeza osomabhizinisi baseMsinga ithuba lokubambisana nabo njengoba benzile kade bepha izipho abakhubazekile.